2 qof ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay duleedka Beledweyn. – Radio Daljir
2 qof ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay duleedka Beledweyn.
Diseembar 24, 2011 12:00 b 0
Baladweyne,Dec,24 -Ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyooday 4 kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen uu ku gadoomay deegaan lagu magacaabo Qar Libaax oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan.
Gaariga oo ahaa nooca rakaabkan ah ayaa waxaa uu ku wajahnaa gobolka Sh/Dhexe,waxaana uu ku gadoomay meel waadi ah oo ku taala tuulada Qar libaax.
Saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa Radio Daljir u xaqiijiyay in dadkii dhaawacmay lasoo gaarsiiyay ayna hada socoto dadaalo lagula tacaalayo caafimaadkooda.
Sarkaal u hadlay cusbitaalka magaalada Baladweyne ayaa noo sheegay in dhaawaca 4-ta ruux ay qaar kamid ah halis tahay,ayna iminka ku mashquulsan yihiin sidii ay ula tacaali lahaayeen.
Shilalka ayaa waayahan waxay kusoo badanayeen gobolka Hiiraan,waxaana shilalka lala xiriiriyaa wadooyinka oo aad u dayacan tan iyo markii ay meesha ka baxday 1990-kii dawladdii dhexe ee dalka oo dhan maamuli jirtay.
Madaxwayne kuxigeenkii hore ee Puntland oo soo dhoweeyay shirkii wadatashiga ee lagu soo gabagabeeyay Garoowe.